Wararka - SHEHWA OO SOO BANDHIGAY XIRIIR XAL AH OO KU SAABSAN BILAABKA BEIFANG
SHEHWA, oo ah soo saaraha Mashiinka Qodida, si la mid ah bixinta alaabada mashiinka oo dhammeystiran macaamiisha, waxay adeegsataa in ka badan 20 sano oo waayo-aragnimo warshadeed ah si ay u siiso xalal qoditaan lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay dadka isticmaala mashiinnada qodista dhulka hoostiisa iyo caawinta adeegga macaamiisha si loo gaaro himilooyinka injineernimada Qiimo jaban iyo hufnaan sare.Waxaa lagu soo warramey in iskaashiga u dhexeeya soo saaraha riigga soo saara Xuanhua SHEHWA iyo BEIFANG kaawada uusan ku ekeyn bixinta qalabka. BEIFANG kawaaladu uma baahnayn inay maal gashato lacag badan, taas oo keydisay qiimaha waxsoosaarka isla markaana yareyneysa halista soo galinta. Qashin qodista SHEHWA wuxuu sifiican u fahmi karaa baahiyaha BEIFANG kaawada wuxuuna siiyaa xalal qiimo leh mustaqbalkiisa.
SHEHWA waxay siineysaa teknoolojiyad qodista BEIFANG Quarry, oo ku taal magaalada Chaoyang, ee gobolka Liaoning, si ay uga caawiso hagaajinta waxtarka qaraxyada.
Cuntada laga helo dhagaxa BEIFANG waa mid ka mid ah dhagaxa ugu tayada sarreeya. Dhagaxa qodaya ayaa qorsheynaya in halkaan laga qodo qiyaastii 3 milyan oo mitir cubic dhagax ah.
Waxaan qiyaasi karnaa haddii aan ku qodno god dhererkiisu yahay 22m iyo dhexroor 115mm ah oo dubbaar leh, waxaa jiri doona u janjeedh muuqda oo waxtarka qodista ayaa hoos u dhici doonta .Sidaas darteed, BEIFANG kaawada ayaa soo iibsatay 2 nooc oo ah SHEHWA X5A-DTH hawo-biyood buuxa. mishiin ay soo saartay SHEHWA. Waxay la shaqeyn kartaa qalabka wax lagu rido ee cadaadiska sare leh, cadaadiska shaqaduna waa illaa 21bar.
Dhagaxa adkaantu waa adkaansho dhexdhexaad ah F = 8-10. Kadib tijaabooyin soo noqnoqday oo laga sameeyay dhagaxa, waxaa la go'aamiyay in la qaato geeddi socodka qallooca iyadoo la marinayo albaabka 140mm iyo xagal 30 darajo ah oo laga helayo jihada toosan. Sidan oo kale, xasilloonida tallaabada ayaa ka sii fiicnaan karta, khadka iska caabbintu wuxuu noqon karaa mid isku mid ah, boqolleyda badan iyo haraaga ayaa la yareyn karaa.
X5A-DTH oo ay soo saartay Taiye, oo ah shirkadda soo saarta riigga ee Xuanhua, ayaa loo isticmaalay in lagu wanaajiyo waxtarka.BIFANG waxay dooratay layligan maxaa yeelay waxay si sax ah u xakamayn kartaa xagalka qodista, nadiifinta godka isla markaana habeeysaa gidaarka daloolka, qoditaanka god dheer iyo dhaqsi dhaqsi leh.
BEIFANG qodista waxay soo bandhigeysaa shuruudo gaar ah oo ku saabsan wax soo saarka wax soo saarka. Waxaan inta badan dhahnaa, "sida ugu fiican ee tayada godka sameysmaya, ayaa ka sii fiicnaanaya qaraxa, iyo dabcan, natiijada ayaa ka sii wanaagsan. Si kale haddii loo dhigo, yareynta xaddiga qarax labaad wuxuu sii kordhin karaa wax soo saarka.
X5A-DTH Riigga qoditaanka waa hawl gebi ahaanba madax bannaan oo riigga ah, oo ku qalabaysan loo adeegsaday cadaadis hawo sare DTH impacter qodista gawaarida hawada kombaresarada, soo bandhig BEIFANG kaawada waa 2 mashiin gebi ahaanba istaandar ah, maxaa yeelay, waxay noqon godad u janjeera, sidaas darteed waxay u baahan yihiin naqshad gaar ah oo caagga ah daboolka boodhka, sidoo kale dhagaxa adag awgood, daloolinku wuxuu u baahan yahay Settings gaar ah oo dhimaya gaar ah.
Tusaale ahaan, qaabdhismeedka juquraafi ee kaawada ayaa u baahan xulashada waxoogaa dhakhso ah oo leh ilkaha sadarka ama isku dar ah ilkaha tiirarka iyo ilkaha guga. Qoditaanka daloolintu wuxuu wareegayaa inta u dhexeysa 70 iyo 80 kacaan daqiiqaddii, iyo jajab dhagaxyada aan muuqan dusha ka hooseeya waxay sababi kartaa godadka inay fashilmaan inay sameystaan, ama xarigga daloolintu wuxuu ku dhegmaa godka, ama cadaadis ayaa ka dhaca.
Marka la eego wax soo saarka wax soo saarka, godadka 22 mitir qoto dheer, waqtiga qoditaanka waxaa laga dhimayaa 1 dalool halkii 45min ilaa celcelis ahaan 1 dalool 30min.